पिनहोल डिस्प्ले भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन नेपालमा सार्वजनिक
काठमाण्डौँ । केही वर्षयता ह्वावेका स्मार्टफोनहरूले नेपालमा र विश्वभर निरन्तर ठूलो सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । खासगरी नोभा सिरिज सार्वजनिक भएसँगै र त्यसको कीर्तिमानी ब्रिक्रीपछि ह्वावेलाई सबैभन्दा नवीन र आकर्षक..
फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले..
एजेन्सी । फाइभ–जी नेटवर्कको विश्वव्यापी स्थापनामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई बाहिर राख्न अमेरिकाले सबै मित्रराष्ट्रहरुलाई आफ्नो पक्ष लिनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । यसैबीच युरोपेली राष्ट्रहरुलाई पनि अमेरिकाले हुवावेका उपकरण खरिद..
क्रिप्टोकरेन्सी संस्थापक पासवर्डसहित मरेपछि १५ अर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोकरेन्सी गायब
एजेन्सी । क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सीका संस्थापकको अचानक मृत्यु भएपछि अरब‌ौं रुपैया बराबरको डिजिटल मुद्रा हराउने खतरा भएको छ। क्वाडरिगा नामक सो भर्चुअल अर्थात भौतिक अस्तित्व नभएको मुद्रा लेनदेन गर्ने सदस्यहरूको..
१५ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो अफरै अफरको बहार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले स्थापनाको १५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा अफरको बहार ल्याएको छ । टेलिकमले आजदेखि फागुन २२ गतेसम्म नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड तथा रजिष्टेशनमा निशुल्क १० एमबी डाटा उपलब्ध..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रिपेड फोन विदेशमा पनि चल्ने भएको छ । यसको मतलब तपाईसँग नेपाल टेलिकमको प्रिपेड फोन छ भने विदेशमा पनि तपाईंको फोन चल्छ । यसअघि पोस्टपेडका प्रयोगकर्तालाई मात्रै..
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकले अब सुलभ दरका नयाँ अल टाइम प्याकहरु मार्फत इन्टरनेट सेवाको फाइदा लिन पाउने भएका छन्। एनसेलले ‘गज्जबको डेटा प्याक’ नामक आकर्षक नयाँ डेटा प्याक ल्याएको हो।..
एनसेलको ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ सुलभ मूल्यमा असिमित कुराकानी
काठमाडौं । आउँदै गरेको प्रणय दिवसलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले सुलभ मूल्यमा असिमित कुराकानीको मजा लिन..
आइफोनको मूल्य घटाउँदै एप्पल
काठमाडौं । अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आइफोनको मूल्य घटाउने संकेत गरेको छ । कम्पनीले अमेरिका बाहिर आइफोनको मूल्य घटाउन लागेको हो । अमेरिकी मुद्राको भाउ अहिले बढिरहेको भएपनि कम्पनीले अन्य..
यी हुन् सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्फी क्यामरा भएका स्मार्टफोन
नयाँ फोन खरीद गर्ने बेलामा अहिलेको पुस्ताका धेरै मानिसको ध्यान यो फोनले कस्तो सेल्फी खिच्दछ भन्नेमै हुन्छ । धेरैले आफ्नो लागि नयाँ फोन किन्दा यसको सेल्फी क्यामरा अर्थात् फ्रन्ट क्यामराको क्षमतालाई..
इसेवा एप डाउनलोड गर्ने १० लाख पुगे, ७५ लाखले लिए बैंकिङ सेवा
काठमाडौं। नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘इसेवा फोन पे प्रालि’ दशौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। २००९ को अन्त्यमा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको इसेवा..
टुटल र पठाओ कुनै नयाँ आविष्कार होईन, सार्वजनिक यातायातको वेथिति हो
अन्जान हिमाली काठमाडौं । टुटल र पठाओ कुनै नयाँ आविष्कार होईन, यस्ता हजारौं मोवाइल एप स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताले चलाई रहेका छन् । आज समाजलाई भ्रमित पार्ने गरी समाचार सम्प्रेशण गर्नु..
काठमाडौं । अर्बपति बिनोद चौधरीले टेलिकम सेवा संचालन गर्न नपाउने भएका छन् । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र इश्वर खतिवडाको सयुक्त इजलाशले यसअघि सर्बोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको..
नेपाल टेलिकमको ५५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारणसभाले मुनाफा रकम मध्येबाट प्रति शेयर रु ५५ का दरले शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । एघारौँ साधारण सभाले..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विन्टर अफर प्याकेज ल्याएको छ। टेलिकमले आफ्ना सेवामा उपभोक्ताका लागि छुट तथा सहुलियतसहितको प्याकेज अफर ल्याएको जानकारी दिएको छ। भ्वाइसदेखि इन्टरनेटसम्मका विभिन्न सेवा ल्याइएका यस्ता प्याकेज २२..
४८ मेगापिक्सल क्यामेरा भएको स्मार्टफोन ल्यायो साओमीले
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता साओमीले रेडमी नोट ७ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। चीनमा सार्वजनिक भएको उक्त फोनमा ४८ मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ भने ४ हजार एमएएच ब्याट्री क्षमता रहेको छ। ६४..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई फोरजी विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमको फोर-जी विस्तारमा परेको गाँठो फुकाएको छ । टेण्डर नै विवादमा परेपछि हाल फोर-जी विस्तारको योजना अलपत्र..
‘इन्टरनेटका पिता’को निधन
इन्टरनेटका प्रतिपादक मानिने अमेरिकी वैज्ञानिक ल्यारी रोबर्टस्को ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । इन्टरनेटको पहिलो प्रारुपको डिजाइन तथा निर्माण गरेका रोबर्टस्को गत २६ डिसेम्बरमा हृदयाघातका कारण निधन भएको हो..
सुबिसुले भयंकर छिटो इन्टरनेट, भयंकर सफा टिभि र भयंकर सस्तो सेवा दिने
काठमाडौं । सुबिसुले इन्टरनेट सेवामा भयंकर नामक अफर ल्याएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुले भयंकर छिटो इन्टरनेट, भयंकर सफा टिभि र भयंकर सस्तो सेवा दिने भएको हो । सुबिसु..
आजदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने भनेका व्यवसायी किन पछि हटे ?
काठमाडौं । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आश्वास दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा तत्काल मूल्य नबढाउने भएका छन् । सम्झौता अनुसार नै दुरसञ्चार नियमवाली संशोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि व्यवसायी पछि हटेका..
काठमाडौं । इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले शुक्रबार इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा अतिरिक्त कर (टिएससी) सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवा..
एक बर्षसम्म स्मार्टफोन नबोक्नेलाई एक करोड रुपैयाँ पुरस्कार
एजेन्सी । के तपाई बिना स्मार्टफोन एक दिन मात्र पनि बस्न सक्नुहुन्छरु सायद सक्नुहुन्न होला । यहाँ एक दुई दिन, हप्ता वा महिना नभई पूरै एक बर्ष बिना फोन बस्नुपर्ने..
ताइवानद्धारा चिनीयाँ कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध
अमेरिकाको नजिकी र चीनको कट्टर विरोधी ताइवानले सुरक्षा समस्याका बीच चिनीयाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको नेटवर्क उपकरणहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । योभन्दा पहिले अमेरिका, व्रिटेन, जापान, न्यूजिल्याण्ड र अस्ट्रेलियाले यो कदम..
सामाजिक संजाल टेलिफोन कम्पनीहरुलाई टाउको दुःखाउदै, आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी घटेको छ। देशका प्रमुख दूरसंचार कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको आयमा प्रत्येक्ष असर परेको छ। भाइबर, फेसबुक म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इमो, स्काइप लगायतका..
आजदेखि काठमाडौंमा ह्याकर सम्मेलन, लाइभ ह्याकिङ हुने
काठमाडौं । आजदेखि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सम्मेलन ‘थ्रेट कोन’ आयोजना शुरु हुने भएको छ। राजधानीको होटल अन्नपूर्णमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलन विश्वमै प्रसिद्ध ब्ल्याकट ह्याट र डीइएफ कोनको नेपालको..
आइफोन टेन आजदेखि नेपाली बजारमा, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । एप्पलले हालै विश्व बजारमा ल्याएका टेन सिरिजका तीनवटा स्मार्ट फोन मंसिर आजदेखि नेपालमा उपलब्ध हुने भएका छन्। ‘टेन’ आर,एस र एस म्याक्स फोनहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएका..
फेसबुकले नेपालबाटै लैजान्छ बर्षमा १३ अर्ब, विश्वभरबाट ६० खर्ब ७० अर्ब
कठमाडौं । फेसबुक, युट्युब, गुगल र इस्न्ट्राग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक अबौं रुपैया आम्दानी गदै आएका छन्। विज्ञापन तथा व्यवस्थापन प्रवद्धनका नाममा सामाजिक सञ्जालको ठूूलो परिणाममा नाफा कमाइरहेपनि नियमितन हुँदा..
नेपाल टेलिकम नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुँदै, के के छन् सुविधाहरु ?
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप ‘नेपाल टेलिकम’ लाई परिमार्जन गरी नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ एपमार्फत नेपाल टेलिकमका जिएसएम, सिडिएमए, पिएसटिएन र एडीएसएललगायतका सेवाको बारेमा जानकारी प्राप्त..
मोबाइल सेवामा एनसेल भन्दा नेपाल टेलिकम उत्कृष्ट
काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा उत्कृष्ट पाइएको छ। तीन वटा मोबाइल सेवा प्रदायकबीच प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा सरकारको स्वामित्वको मोबाइल सेवा उत्कृष्ट पाइएको हो। प्राधिकरणले चारवटा मापदण्ड..
लक्ष्मीपूजा कै दिनमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा समस्या
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा समस्या देखिएको छ । टेलिकमको मोबाइलबाट टेलिकमकै तथा अन्य नेटवर्कमा फोन गर्दा फोन नलाग्ने समस्या देखिएको हो । टेलिकमका पोष्टपेड तथा प्रिपेड दुबै फोनबाट फोन गर्दा..
Results 402: You are at page5of 14